profit up(profit up) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
लक्ष्मी लघुवित्तको नाफामा झिनो प्रगति, रिजर्बमा छलाङ
काठमाण्डौ । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा खूद नाफातर्फ सामान्य प्रगति गरेको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा २ करोड ३१ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यो कम्पनीको नाफा २ करोड २५ लाखमा सीमित थियो । यसरी कम्पनीले खूद नाफातर्फ ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रगति गरेको...
नेशनल माइक्रोफाइनान्सका खूद नाफातर्फ ३४.२१% को फड्को, इपीएस रु. ७०.३८
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स बित्तीय संस्था लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा खूद नाफातर्फ ३४.२१ प्रतिशतको फड्को मारेको छ। समीक्षा अवधिमा यो कम्पनीले २ करोड ६४ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको नाफा १ करोड ९७ लाखमा सीमित थियो । यो कम्पनीले ३ करोड ९ लाखमा सीमित संचालन मुनाफालाई बढाएर ४...
जनता बैंकको कमालको प्रगति: संचालन मुनाफामा १४२.२२% को फड्को, खूद नाफा ४७.६३% ले वृद्धि
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय शाखा तथा व्यवसाय बिस्तारमा आक्रामक बनिरहेको जनता बैंक नेपाल लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म ९३ करोड ४७ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो नाफा ४७.६३ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ६३ करोड ३१ लाख मुनाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंकले संचालन...
कान्छो बैंकको गज्जबको प्रगति, नाफामा ७४.६७% र रिजर्बमा १७९.७०% को फड्को
काठमाण्डौ । देशकै कान्छो वाणिज्य बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमासमा खूद नाफातर्फ ७४.६७ प्रतिशतको छलांग हानेको छ । यो बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ५० करोड १३ लाख खूद नाफा आर्जन गरेकोमा त्यसलाई बढाएर समीक्षा अवधिमा ८७ करोड ५७ लाखको उचाई चुमाएको हो । यो नाफा वितरणयोग्य मुनाफा समेत हो...
नाफा, जगेडा र इपीएसमा प्राइम बैंकको छलाङ, अधिकांश सूचक थप मजबूत
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खूद नाफातर्फ ४२.३३ प्रतिशतको छलाङ हानेको छ । समीक्षा अवधिमा १७ करोड ३५ लाख बढी संभावित जोखिम व्यवस्थापनबाट राइट ब्याक गरी यो बैंकले १ अर्ब ८९ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा १ अर्ब ४६ करोडमा सीमित थियो । बैंकले वितरणयोग्य मुनाफा भने १ अर्ब ९४ करोड आर्जन...
झन् झन् बलियो बन्दै इन्भेष्टमेन्ट बैंक: नाफामा छलाङ, व्यवसायमा फड्को
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमासमा कमालको प्रगति गरेको छ । यो बैंकले खूद मुनाफामा २६.०५ प्रतिशतको प्रगति गरेको हो । यो अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ९६ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले समीक्षा अवधिमा ८२ करोड भन्दा बढी संभावित जोखिम व�...
स्वाबलम्बन लघुवित्तको नाफामा ३१.१६% को वृद्धि, खूद ब्याज आम्दानीमा गिरावट
काठमाण्डौ । स्वालम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खूद नाफातर्फ ३१.१६ प्रतिशतको प्रगति गरेको छ । अघिल्लो वष २६ करोड ४१ लाखमा सीमित नाफालाई बढाएर कम्पनीले ३४ करोड ६४ लाखको उचाईमा पुर्याएको हो । यो लघुवित्तले ४१ करोड ८६ लाखमा सीमित संचालन मुनाफालाई बढाएर ५४ करोडको उचाई चुमाएको छ...
प्रगति होस् त आरएमडिसीको जस्तो !
काठमाण्डौ । आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म २५ करोड ७३ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यो कम्पनीको खूद नाफा २१ करोड १२ लाखमा सीमित थियो । व्यवसाय बिस्तारमा ध्यान दिएका कारण कम्पनीले खूद ब्याज आम्दानीमा पनि राम्रो बढोत्तरी गरेको छ ।...
एभरेष्ट बैंकको नाफामा उत्साहप्रद प्रगति, २.७ अर्ब लाभांश बाँड्नसक्ने !
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्ममा नाफामा निकै राम्रो प्रगति गरेको छ । यो अवधिमा बैंकले २ अर्ब ७८ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको हो । यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको नाफा २ अर्ब ५ करोडमा सीमित थियो । एभरेष्ट बैंकले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिंग स्�...
एक्सल बैंकको संचालन नाफा घट्यो, अन्य सूचकमा औसत प्रगति
काठमाण्डौ । विर्तामोडमा मुख्य कार्यालय रहेको एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म १५ करोड ६६ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा बैंकको नाफा १५ करोड ४ लाखमा सीमित थियो। समीक्षा अवधिमा बैंकको संचालन मुनाफा भनेको घटेको छ । अघिल्लो वर्ष २३ करोड ३४ लाख रहेको यस्तो मुनाफा घटेर २१ करोड २७...
ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफामा झिनो प्रगति, रिजर्बमा ८९.२५% को छलाङ
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले सामान्य प्रगति भएको वित्तीय विवरण पस्किएको छ । बैंकले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड(एनएफआरएस) पस्किएको हो, जहाँ उसको नाफामा झिनो मात्र प्रगति भएको देखिएको छ भने बाँकी सूचकहरुमा समेत सामान्य मात्र प्रगति भएको छ । समीक्षा...
अत्यधिक खर्चका बाबजुद एनआइसीको नाफा वृद्धि, निक्षेप र कर्जातर्फ कमालको प्रगति !
काठमाण्डौ । सेवा बिस्तारमा आक्रामक बन्दै आएको एनआइसी एशिया बैंकले अत्यधिक खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमासमा खूद नाफा बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले मंगलबार नेपाल राष्ट्रबैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्टान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुरुप वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको...